Nkọwa:Igbe mkpuchi Silk maka Wheel Steering,Ekele Silicone Ngwá maka Ikiri Uwe,Ụgbọala na-agba ụkwụ na-ekpuchi Walmart
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Plastic plastic cover maka steering wheel walmart
Ihe Nlereanya.: SWC2503
Ụdị mkpuchi ígwè a nwere ike iji chaa chaa. Anyị bụkwa ụlọ ọrụ OEM maka mkpuchi plastic plastic maka ugbo ụkwụ . Ọ na-adịgide adịgide ma na-enwe mmasị na gburugburu ebe obibi, ihe mkpuchi silicone maka nkedo ụkwụ nwere ike ịka mma maka iji ya, n'ihi na ọ bụ 100% nri silica. Na mkpuchi ikuku ígwè nke na-esochi ya bụ na ị na-anya ụgbọ ala, mgbe ị na-anya ụgbọ ala ahụ, ọ dị mma, na-emetụkwa ya aka. ihe nkedo uhie uhie na-aghọwanye ndị na-ewu ewu, ọ bụghị nanị ọnụ ala dị ala, kamakwa ya na oke elu.
Ezigbo ugwo ugwo ugwo ahia nke silicone Kpọtụrụ ugbu a
Igbe mkpuchi Silk maka Wheel Steering Ekele Silicone Ngwá maka Ikiri Uwe Ụgbọala na-agba ụkwụ na-ekpuchi Walmart Igbe mkpuchi Silicone maka Jeep Dodge Igbe mkpuchi Silicone maka Jeep Cherokee Igbe mkpuchi Silk maka igodo igodo Renault Ibe mkpuchi isi maka Ford Igbe mkpuchi Silicone maka Ukwu Ukwu